သင့်မျက်နှာနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးနေကာမျက်မှန်ကို ဘယ်လိုရွေးမလဲ • POINT
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့ နေကာမျက်မှန်လေးတွေ လိုအပ်လာပြီနော်။ သင်မျက်မှန်တစ်လက်ဝယ်မယ်ဆိုရင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံထက် ပထမဆုံးသင့်မျက်နှာပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ပုံစံကို ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။ သင်မျက်နှာပုံစံက ဘယ်ထဲမှာပါမလဲ? ဘဲဥပုံလား၊ လေးထောင့်ဆန်လား၊ ဝိုင်စက်တဲ့မျက်နှာလား ဒါမှမဟုတ် အသည်းပုံစံရှိတဲ့မျက်နှာလားဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုမျက်မှန်ဒီဇိုင်းလေးတွေက သင့်မျက်နှာပုံစံနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
အသည်းပုံမျက်နှာပုံစံရှိတဲ့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး Lucy Hale လို မေးရိုးကျဉ်းပြီး နဖူးနဲ့ပါးရိုးကျယ်ကျယ်ရှိသူတွေ အတွက် မေးရိုးကျယ်စေပြီး နဖူးခင်းကျဉ်းစေတဲ့ မျက်မှန်ဒီဖိုင်းကို ေ၇ွးချယ်သင့်ပါတယ်။ မျက်မှန်ဘောင်ခပ်ကြီးကြီးဒီဇိုင်းတွေက အသည်းပုံမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။
Lea Michele’s လို နဖူးကျယ်၊ မေးရိုးကားပြီး မေးစေ့နဲ့ပါးရိုးကျယ်ကျယ်ရှိတဲ့ လေးထောင့်ကျကျ မျက်နှာပုံစံရှိသူတွေအတွက် မျက်မှန်ဘောင်အဝိုင်းတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မျက်မှန်အဝိုင်းလေးတွေက မေးရိုးကားနေတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်နှာကို အချိုးကျလှပစေပါတယ်။
Jennifer Lawrence လို မျက်နှာဝိုင်းသူတွေက မျက်နှာကိုကြည့်ရတာရှည်ပြီး သေးသွယ်တဲ့ပုံစံ ပေါက်စေမယ့် ကြောင်မျက်လုံးပုံစံထောင့်ချွန်နေတဲ့ မျက်မှန်ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။ မျက်နှာဝိုင်းသူတွေအတွက် Retro မျက်မှန် Styleက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။
သင်ဟာ Kristen Stewart လို ဘဲဥပုံမျက်နှာရှိရင်တော့ ကံအကောင်းဆုံးသူတွေထဲက တစ်ယောက်ပေါ့။ ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘဲဥပုံပုံစံမျက်နှာက ပြောစရာမလိုအောင် အချိုးကျတဲ့ မျက်နှာပုံစံဖြစ်လို့ပါပဲ။ မျက်မှန်ပုံစံမျိုးစုံကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် မျက်မှန်ဘောင် အရွယ်အစားကတော့ သင့်မျက်နှာနဲ့ အချိုးကျရပါမယ်။ ဘဲဥပုံရှိပြီးမျက်နှာသေးတဲ့သူတွေက အရမ်းကြီးလွန်းတဲ့ နေကာမျက်မှန်ကို မေ၇ွးချယ်ဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။
ပူပြင်းတဲ့နွေရာသီကိုရောက်လာပြီဆိုတော့ နေရောင်ခြည်ဒဏ်ကိုကာကွယ်ဖို့ နေကာမျက်မှန်လေးတွေ လိုအပ်လာပြီနော်။
သင်မျက်မှန်တစ်လက်ဝယ်မယ်ဆိုရင် သင်ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ပုံစံထက် ပထမဆုံးသင့်မျက်နှာပုံစံနဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ပုံစံကို ရွေးချယ်ဖို့လိုပါတယ်။
သင်မျက်နှာပုံစံက ဘယ်ထဲမှာပါမလဲ? ဘဲဥပုံလား၊ လေးထောင့်ဆန်လား၊ ဝိုင်စက်တဲ့မျက်နှာလား ဒါမှမဟုတ် အသည်းပုံစံရှိတဲ့မျက်နှာလားဆိုတာ သိထားဖို့လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုမျက်မှန်ဒီဇိုင်းလေးတွေက သင့်မျက်နှာပုံစံနဲ့ ဆွဲဆောင်မှုရှိသလဲဆိုတာ ကြည့်လိုက်ကြရအောင်။
အသည်းပုံမျက်နှာပုံစံရှိတဲ့ ဟောလိဝုဒ်မင်းသမီး Lucy Hale လို မေးရိုးကျဉ်းပြီး နဖူးနဲ့ပါးရိုးကျယ်ကျယ်ရှိသူတွေ အတွက် မေးရိုးကျယ်စေပြီး နဖူးခင်းကျဉ်းစေတဲ့ မျက်မှန်ဒီဖိုင်းကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
မျက်မှန်ဘောင်ခပ်ကြီးကြီးဒီဇိုင်းတွေက အသည်းပုံမျက်နှာပိုင်ရှင်တွေနဲ့ အလိုက်ဖက်ဆုံးပါပဲ။Lea Michele’s လို နဖူးကျယ်၊ မေးရိုးကားပြီး မေးစေ့နဲ့ပါးရိုးကျယ်ကျယ်ရှိတဲ့ လေးထောင့်ကျကျ မျက်နှာပုံစံရှိသူတွေအတွက် မျက်မှန်ဘောင်အဝိုင်းတွေကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
မျက်မှန်အဝိုင်းလေးတွေက မေးရိုးကားနေတဲ့သူတွေရဲ့ မျက်နှာကို အချိုးကျလှပစေပါတယ်။
Jennifer Lawrence လို မျက်နှာဝိုင်းသူတွေက မျက်နှာကိုကြည့်ရတာရှည်ပြီး သေးသွယ်တဲ့ပုံစံ ပေါက်စေမယ့် ကြောင်မျက်လုံးပုံစံထောင့်ချွန်နေတဲ့ မျက်မှန်ဒီဇိုင်းကို ရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
မျက်နှာဝိုင်းသူတွေအတွက် Retro မျက်မှန် Styleက အသင့်တော်ဆုံးပါပဲ။သင်ဟာ Kristen Stewart လို ဘဲဥပုံမျက်နှာရှိရင်တော့ ကံအကောင်းဆုံးသူတွေထဲက တစ်ယောက်ပေါ့။
ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ ဘဲဥပုံပုံစံမျက်နှာက ပြောစရာမလိုအောင် အချိုးကျတဲ့ မျက်နှာပုံစံဖြစ်လို့ပါပဲ။
မျက်မှန်ပုံစံမျိုးစုံကို ရွေးချယ်အသုံးပြုနိုင်ပေမယ့် မျက်မှန်ဘောင် အရွယ်အစားကတော့ သင့်မျက်နှာနဲ့ အချိုးကျရပါမယ်။
ဘဲဥပုံရှိပြီးမျက်နှာသေးတဲ့သူတွေက အရမ်းကြီးလွန်းတဲ့ နေကာမျက်မှန်ကို မေရွးချယ်ဖို့တော့ သတိထားရပါမယ်။